Elementaha cinwaanka emailka
Baro Calaamadaha Caamka ah ee la Isticmaali karo
Cinwaannada emailka, sida "me@example.com", waxay ka kooban yihiin dhowr arrimood.
Ugu dambeyntii, waxaad ku aragtaa '' 'dabeecadda ' dhexda 'ee cinwaanka email kasta. Si sax ah "xaq" waa magac domain , "example.com" tusaale ahaan.
Domains internetka ayaa raacaya nidaam heer sare ah. Waxaa jira tiro go'an oo ah heerarka ugu sarreeya ("com," "org," "info," "de", iyo codsiyada kale ee dalka, tusaale ahaan), kaas oo dhisaya qaybta ugu dambeysa ee magac kasta oo magac domain ah. Xayawaan heer sare ah, magacyada domainka waxaa loo qoondeeyey dadka iyo ururrada codsanaya iyaga. "ku saabsan" waa tusaale tusaale ah magac domain caadada ah. Milkiilaha domain ayaa markaa ka dib abuuri kara xuduudaha hoose, si uu u sameeyo wax sida "boetius.example.com."
Haddii aanad iibsan domain adi, ma haysato wax badan (ama xitaa doorasho) oo ku saabsan midig, magaca domain ee qaybta cinwaanka emailkaaga.
Laga bilaabo "bidix" ee 'sign' waa magaca isticmaalaha. Waxay cadeeyneysaa cidda leh domain waa mulkiilaha cinwaanka emailka, tusaale ahaan, "aniga."
Haddii aan laguu qoonin dugsigaaga ama kan loo shaqeeyaha (ama saaxiib), waxaad dooran kartaa magaca isticmaalaha si xor ah. Markaad iska diiwaangaliso akoon bilaash ah , tusaale ahaan, waxaad gali kartaa magacaaga magaciisa.
Si kastaba ha noqotee, bilaash maaha. Xaqiiq ahaan, tirada jilayaasha loo isticmaali karo qaybta isticmaale-ahaaneed ee cinwaannada emailka ayaa si maldahan loo tirinayaa. Wax kasta oo aan loo ogolaan si cad ayaa mamnuuc ah.
Tilmaamo La Ogolaaday Cinwaannada Email
Hadda, maxay yihiin jilayaasha loo isticmaali karo in lagu dhiso cinwaan email? Haddii aan la tashano dukumiintiga caadiga ah ee Internetka, RFC 2822, aqoonsashada iyaga ayaa u muuqda inay yihiin dadaal adag oo adag.
Magaca isticmaalaha wuxuu ka kooban yahay ereyo , oo ay weheliyaan dhibco ['.']. Eraygu waa magac loo yaqaan " atom" ama "string". Ani waa a
taxane ah astaamaha ASCII
min 33 ilaa 126
0 illaa 31 iyo 127 ayaa xakamaynaya jilayaasha, 32 waa xeelad
labo jilayaal kale,
jeexjeexyada iyo calaamadaha oraahda
Kuwa xoog badan '@'.
Qalabka la soo xigtay wuxuu bilaabmaa oo dhammaadaa dabeecad qaylo leh ("). Inta u dhaxaysa qoraalada, waxaad ku dari kartaa wixii ASCII ah (hadda laga bilaabo 0 ilaa 177) marka laga reebo soo-jeedinta lafteeda iyo soo celinta gawaarida ('/ r'). Qodobka dhabta ah wuxuu soo jeedin doonaa dabeecad kasta, dhabar-jebinta wuxuu keenaa dabeecadda soo socota si uu u lumiyo macnaha gaarka ah ee sida caadiga ah ku jiri lahaa macnaha guud ahaaneed. Tusaale ahaan '/' 'ma joojiyo xarfaha la soo xigtay laakiin waxay u muuqataa sida soo xigta.
Waxaan u maleynayaa inay fiican tahay haddii aan iloobo dhammaanba (oo la soo xigto ama aan si dhakhso ah loo tirtirin).
Calaamadaha Waxaad isticmaali kartaa cinwaankaaga Emailka
Muxuu heerkulku hoos udhaca isticmaalka
wixii ASCII dabeecad xumo ah
oo lagu daray qaar ka mid ah quruxda, laakiin si kale "asal" ah
'!', '#', '$', '%', '&', '*' '+', '-', '~', iyo wax kasta oo aad ka heli kartid ASCII 33 iyo 47.
Marka la soo koobo, isticmaal xarfaha yar yar , lambarrada, iyo hoosta hoose si aad u abuurto cinwaanka emailkaaga.
Dib u eegista Outlook.com
Macaamiisha IM-keli-keli ah
Waa maxay macneheedu waa YWA?
Waa maxay Buug-gacmeedka Retweet ee Twitter?
Waa maxay sababta aad u jeclaan lahayd 'Tard of Grumpy Cat' Meme
Soo-dejinta iPhone Apps-ka Dukaanka App
Kaalinta dhaqaale-u-isticmaalka MFC-J5620DW All-in-One Printer
Maxay Tilmaamaha Qiimeynayaan Marka Gaadiidka Gawaarida Gawaarida la dhigto
Sida loo sameeyo Shabakada Wireless Network
Sida loo kordhiyo Website-ga Windows 8 Bilawga Bilowga
Sida Loo Hayo Nambarkaaga * * 67
Waa maxay Google Fiber?
Nidaamyada Hawlaha: Unix iyo Windows
Bandhigga Wicitaanka qalabka loo adeegsado AM, FM, Satellite, iyo Reediyo Internet
Naqshadda Webka waa Dhammaan Saacadaha
9ka Tv-yada ee ugu Wanaagsan ee Laga Yaabo Inuu Ku Bixiyo 2018 Ilaa $ 500
Talooyin loogu talagalay isticmaalka kamaradaha roobka
Top 10 Meelaha Mobile News
Sida Loo Diro Faylasha Lacag Leh Lacag Leh
8 Talooyin muhiim ah oo amniga loogu talagalay dadka isticmaala Android
Half-Life 2: Dib-u-eegista Baadhitaanka Orange (PS3)
Darbeel Sawir ah - Darblet Model DVP 5000